Agbanyeghị na ọ bụ ihe ọ toụ na ịchọta ọwa ọhụrụ na ndị na - ege ntị na - eresị, ọ dị ọnụ ala karịa ijide otu. Agbanyeghị, njigide adịghị adabere n'otu ndị ọkwọ ụgbọala dịka nnweta - ebumnuche dị n'azụ ha dị iche, yana agbanyeghị na njirimara onye ọrụ na mmetụta nke sitere na abụọ ndị a bụ nke na-akwado ya, a ga-agwa ha iche iche. Iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na-ewulite site na njigide. Nnweta ndị ahịa bụ naanị ọnụ ụzọ gafere ya.
Ọ bụrụ na ị nwere nchịkọta Google Analytics enyere ma tinye na Google Search Console, ị ga-enwe ike soro ala ndị a gbara ajụjụ ruo ọnwa 16 na n'oge gara aga ma mata top performingrụ ndị. Can nwere ike ime ka nyocha ahụ dịkwuo omimi site na ijikọ isiokwu ndị a gaa na peeji nke ọdịda kpọmkwem ma chọpụta ha dị ka isi mmalite kachasị mma nke njem onye ọrụ iji nweta. Enwere ike imebi nke a site na ịkọwa data a na njirimara mmadụ, ụdị ngwaọrụ, omume, na ọdịmma iji mata ụdị ndị na-ege ntị nwere ike ịgbanwe.
“Ebumnuche anyị bụ ịkwado usoro usoro nri [nke a] maka Martha. Ọ bụ onye na-anọ n'ụlọ nne ya n'etiti afọ 40 nke hụrụ nri. Ọ hụrụ n'anya #foodporn peeji nke ma kesaa efere ya na Instagram. Ọ na-agbanwe agbanwe ma nwee ụkpụrụ ọdịnala yabụ nnukwu ezumike bụ nnukwu ihe nye ya n'ihi na ha bụ naanị oge n'afọ mgbe ọ nwere ike isi nri ezinụlọ niile na ndị enyi ha. Martha azutala anyi akwukwo nri anyi n’aka anyi ma lelee uzo Instagram na webusaiti anyi nke ndi obodo n’eji esi nri otu ugboro n’onwa. Ọ bụ n'ezie na onye na-adịghị ngwa nri na organic nri. ”
Elekwasịla anya na mkpụmkpụ ọdụ dị mkpụmkpụ kama gbalịa ibuli mkpa maka isiokwu ndị metụtara ya. Can nwere ike nweta nke a site na ịgagharị isiokwu LSI na isiokwu syntagms nke na-eme ka ndị ọrụ nwee mmasị na ebumnuche. Ka anyị laghachi na Martha na nkwalite akwụkwọ nri. Isiokwu ndị n’edemede nwere ike ime ka Mata zụta akwụkwọ nri si n’aka gị bụ usoro isi nri na-adịghị ngwa ngwa, ebe a na-eri nri, na ite ndị eji eme ha, ụdị ihe eji edozi oge ma ọ bụ etu ha si tolite ma tinye. Mata nwere ike iduga na ịzụta akwụkwọ nri ma ọ bụrụ na ọ mata onwe ya dị ka ndabere nke ezinụlọ wee hụ tebụl nri abalị dị ka isi okwu nke nzukọ, obodo na ụkpụrụ ezinụlọ. Etinyela onye ọrụ aka ka ọ mata onwe ya dị ka akụkụ nke nnukwu akụkụ, mana gbalịa hazie ahụmịhe ha.
Akụkụ ndị ọzọ metụtara teknụzụ metụtara ọrụ na arụmọrụ nke weebụsaịtị ahụ dị ka oge iwe peeji, nzaghachi na nnweta bụ ihe ndị dị mkpa SEO na-ebute njigide onye ọrụ ma nyere aka wulite iguzosi ike n'ihe. Ọ bụrụ na enweghị ike ịnweta webụsaịtị gị ma ọ bụ sie ike ibu, ndị ọrụ nwere ike ibiaghachi ma ọ bụ tinye aka na ya.
Nchịkọta ọdịnaya maka otu n'ime usoro ndị a nwere ike ịmekọrịta na kalenda ederede gị iji nye nsonaazụ kacha mma na usoro mmeghe na CTR. Nwere ike imebi mgbalị gị gaa na nkewapụta aha email site na mmasị ndị ọrụ, ọnọdụ oge, na omume mmadụ.